Mpirotsaka An-tsitrapo Manao Vonjy Voina Rehefa Loza Voajanahary, Mikolokolo Finamànana Eo Amin’ny Taiwanais Sy Japoney · Global Voices teny Malagasy
Mpirotsaka An-tsitrapo Manao Vonjy Voina Rehefa Loza Voajanahary, Mikolokolo Finamànana Eo Amin'ny Taiwanais Sy Japoney
Voadika ny 09 Marsa 2016 9:58 GMT
Japoney mpirotsaka an-tsitrapo tao amin'ny faritr'i Tainan tratry ny horohorontany. Sary nopihan'i Enbion Micah Aan
Teo anelanelan'ny 1895 sy 1945, zanatany Japoney i Taiwan. Kanefa, tsy nanakana ny vahoaka roa tonta tsy hamboly fifandraisana anaty finamànana ilay tantaran'ny fananiham-bohitra. Nandritry ny folo taona farany teo, tsy voafetran'ny sisintany fa nametraka fifanajàna sy fifankahafantarana eo amin'izy samy izy ireo mpirotsaka an-tsitrapo manao vonjy aina rehefa misy loza voajanahary.
“New Bloom”, mpanoratra sy ilay mpakasary, Enbion Micah Aan, dia nandrakira an-tsary ireo Japoney mpirotsaka an-tsitrapo nanampy taorian'ilay horohorontany tao Tainan. Ny 21 Febroary ny lahatsoratra voalohany, nitondra lohateny hoe “Japoney Mpirotsaka An-tsitrapo tao amin'ny faritr'i Tainan Tratry ny Horohorontany”, no navoaka ho ampahany amin'ireo tsanganan-tsary ‘Seeds” (Ambioka) an'i New Bloom, izay mikatsaka ny hitrandraka sy hampiroborobo tolona madio, amin'ny fanasongadinana ireo ezaky ny isambatan'olona ao anatin'ny fiovàna sosialy. Ny dika avoaka manaraka etoana dia nahazoan'ny Global Voices alàlana ny famoahana azy.
Ny 13 Febroary, tao amin'ny toerana tratry ny horohorontany tao Tainan, nahita Japoney mpirotsaka an-tsitrapo niisa 20 teo ho eo aho nitafy ny akanjon'ny Fiangonana Presbiteriana ao Taiwan, niaraka tamin'ny saina Japoney hita amin'ny akanjo na ‘badges’ apaingotra. Tao amin'ny sampana famatsiana sakafo, betsaka kokoa noho ny Taiwanais ireo Japoney mpirotsaka an-tsitrapo. Niresaka tamin'ny vitsivitsy amin'izy ireny aho, ary ny fihetsehampo iraisan'ny rehetra eny anivon'ireo Japoney mpirotsaka an-tsitrapo dia nahatsapa ho terem-panahy hanampy amin'ilay fanavotana aina ry zareo, satria tamin'ny firenena rehetra dia i Taiwan no nanome vola betsaka indrindra taorian'ilay horohorontany tamin'ny 11 Martsa nandravarava an'i Japàna.
Sary an'i Enbion Micah Aan.
Akiko Kitayama, matianina amin'ny filalaovana ‘billard’, monina sy miasa ao Tainan, niteny hoe
Rehefa misy olona anaty fahasahiranana, ary olona nanampy anay tany aloha, mazava oatra, hanampy azy izahay. Nanampy anay ianareo [vahoaka eto Taiwan] ary tsy namanareo akory aza izahay, noho izany dia mazava loatra fa tonga izahay hanampy. Ho mpinamana tsy mifankafoy i Japàna sy Taiwan manomboka izao.
Ny ankamaroan'ireo mpirotsaka an-tsitrapo no niteny fa efa hatramin'ny andro voalohany izy ireo no naniry koa hanampy, saingy tsy nisy ny nahafahana nanao izany raha tsy nisy an'i Masaki Tsuji, mponina ao Tainan, nandefa tao amin'ny Facebook, nampahafantatra ny olona fa amin'ny alàlan'ny Fiangonana Presbiteriana ao Taiwan dia ho azon'izy ireo atao ny miditra hanampy any amin'ilay faritra tratry ny horohorontany. Nitondra 15 mpirotsaka an-tsitrapo niaraka taminy izy.
Nisy ihany koa hafa nanatevina laharana ilay tarika mpirotsaka an-tsitrapo tamin'ny alàlan'ny Fiangonana Presbiteriana, tsy nahita akory ilay filazàna tao amin'ny Facebook. Iray tamin'izy ireny i Mew Hatta, mpianatra ao Taipei mandalina momba ny fambolena, izay efa nanana traikefa niarahany niasa tamin'ny Fiangonana Presbiteriana ao Taiwan tao amin'ny Foiben-toeran'ny Kristiana Japoney Mpanao Vonjitaitra Ho an'ireo Tradoza, tany amin'ny Distrika Avaratra Atsinanana, nandritry ny ezaka fanavotana taorian'ilay horohorontany 2011 tao Japàna.
Nisy ihany koa ireo Japoney mpirotsaka an-tsitrapo nilaza fa nanampy ihany ry zareo, tsy nijereny izay fandraisana anjara nataon'i Taiwan taorian'ny horohorontany tao Japàna — Hiroyuki Yamada, izay monina any amin'ny manodidina ary mitantana tranombarotra Japoney iray ao Tainan, sy Reiko Akamine, mpianatra ao amin'ny Anjerimanotolon'i Cheng Kung .
Any anaty media ao Taiwan, betsaka ny resaka natao momba ny fangorahana sy fanampian'ny Japoney taorian'ilay horohorontany tao Tainan. Na dia natosiky ny resaka politika aza ny sasany tamin'ireo ezaka nokarakaraina, toy ny hetaheta diplaomatika handrafitra finamànana amin'i Japàna ho fiatrehana an'i Shina, ambonin'ny fahitàna sy firesahana amin'ireo tena Japoney mpirotsaka an-tsitrapo, na ireo izay mpanaramaso faran'izay henjana aza dia hanao tsoakevitra fa tena izy tsy misy fitaka ny fifandraisana eo amin'ny vahoaka roa tonta.
Raha betsaka no mety handika ilay fifandraisana misy amin'izao fotoana izao eo amin'ny firenena roa tonta ho finamànana, tsy tsotra araka izay ahitàna azy ety ivelany akory ny tantara sy ny politika misy eo amin'i Japàna sy Taiwan. Hatramin'izao, tsy mbola eken'i Japàna amin'ny fomba ofisialy ny governemanta ao Taiwan, ary araka ny maha-mpanjanaka ara-tantara an'i Japàna tao Taiwan, ny ankamaroan'ireo vahoaka ao Taiwan no mankalaza ny andro manamarika ny nifaranan'ny fibodoan'ny Japoney, taorian'ny Ady Lehibe Faharoa.
Tsy hoe tamin'ny nanombohan'ny fanapahana feno herisetra nataon'ny Kuomintang (KMT) tao Taiwan tamin'ny 1949, taorian'ny nisintonan'ny antoko hankany rehefa resy teo ampelatanan'ny antoko kaominista avy any amin'ny Tanibe Shina, no hoe niha-nalefaka ny toetsain'ny ankamaroan'ireo ao Taiwan manoloana ny Japoney ka nahatonga ilay fibodoana nataon'i Japàna horaisina ho toy ny tantara fahagola sisa. Japàna tao anatin'ny andraikiny naha-mpanjanaka teo aloha azy tao Taiwan dia azo jerena amin'ny lafiny iray ho nanomboka dingana fampandrosoana ho maoderina sy fananganana fotodrafitrasa maoderina izay mbola ampiasaina hatramin'ny anio. Fa etsy ankilany, nanaraka akaiky ihany koa ny fitrandrahana ekolojika sy ara-tontolo iainana tao amin'ilay nosy (matetika mba hanorenana ireo fotodrafitrasa notanisaina tetsy aloha) hatramin'ny fambaboana ny fo sy, tamin'ny tranga sasany, famonoana olona tao Taiwan mihitsy aza, taty aoriana kely nametrahany ny fototry ny fanapahana tao niaraka amin'ny fitondran'ny KMT.
Na izany aza, tany amin'ny fototra sy ny isam-batan'olona, ny fifamatorana teo amin'ny kolontsaina roa tonta dia teraka avy amin'ireo fifandroritana sy fahasarotan'ny tantara ary ny politika, ary nivoitra manokana io, indrindra indrindra fa nandritry ny fotoanan'ireo loza voajanahary. Tsy misy isalasalàna fa namboly fifankahafantarana lalina teo amin'ny andaniny sy ny ankilany ny Taiwanais sy ny Japoney.
Sary hafa mandrakitra ny ezak'ireo Japoney mpirotsaka an-tsitrapo tao amin'ny toerana tratry ny horohorontany tao Tainan :
Sar an'i Enbion Micah Aan.